ခိုင်ဘုရင်ကြီး ကြင်ဖက်ရှာတွေ့သွားခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ခိုင်ဘုရင်ကြီး ကြင်ဖက်ရှာတွေ့သွားခြင်း
Posted by ဗုံဗုံ on Dec 4, 2012 in Copy/Paste | 40 comments
ထမင်းတစ်အိုးချက်ခန့် ကြာသောအခါတွင်မူ နန်းတော်တွင်းသို့ သိက္ခာတော်အပြည့်ဖြင့် စည်သူဆရာတော် ဒိုင်ဗင်ထိုးတော်မူ၍ ကြွလာလေသည်။ ခိုင်ဘုရင်ကြီးလည်း လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားပြီးလျင် ဆရာတော်အား နေရာထိုင်ခင်းပေးပြီး ပုဆစ်တုတ် ထိုင်နေတော်မူလေသည်။ ဆရာတော်က ထန်းလက်ယပ်ကြီး ကိုကိုင်၍ “ ကဲ ဒါကာတော်မင်းကြီး လျှောက်စရာရှိတာ လျှောက်လေ ဆရာတော် သိပ်မအားဘူး ဒီကပြန်ရင် ဆိုမာလီတွေကို လက္ခဏာ ကြည့်ပေးစရာ ရှိသေးတယ်ကွဲ့ “
“မှန်ပါ့ဘုရား” ဟုဆို၍ ဘေးဘီဝဲယာကို လှည့်ကြည့်နေလေသည်။ အနားတွင် ယပ်တော်သွင်းနေသော မောင်ဆာမိမှာလည်း ယပ်တောင်ဖြင့် ဖတ်ကနဲ မျက်နှာကို ကွယ်လိုက်လေသည်။ အမတ်တွေလည်း လေးစားရိုသေသော ပုံစံဖြင့် မျက်နှာနဲ့ ကြမ်းပြင် အပ်ထားကြလေသည်။ ဘုရင်တစ်ပါးတည်း ငုတ်တုတ် ။ မည်သူမျှ မလျှောက်တင်ရဲကြ ။ ရှက်ရှာကြမှာပေါ့ ဒီအရွယ်ကြီးကျမှ မိန်းမရချင်လို့ ယတြာတောင်းရတာ ဘယ်သူမရှက်ဘဲရှိလိမ့်မတုံး။ ဆရာတော်ဘုရားလည်း စိတ်မရှည်တော့ ထန်းလက်ယပ်ကြီးဖြင့် ကြမ်းပြင်ကို ဗြန်းခနဲ နေအောင် ရိုက်လိုက်ပြီးလျှင် “တယ်…လျှောက်စရာရှိတာ လျှောက်ကြတာမဟုတ်ဘူး ပင့်တုန်းက ပင့်ပြီးတော့ မြန်မြန်လျှောက် ဒီသဘောင်္အမှီ ကြွရမှာ “ ဟုဆိုလိုက်သဖြင့် ဘုရင်လည်း ဘိုင်နိမ်းတပ်၍ ခေါ်လေတော့သည်။
“ ဟဲ့ အမတ်ကြီးမိုက် လျှောက်တင်စရာရှိတာ တင်တော့လေ “ ဟု အမတ်ကြီးမိုက်အား လူမိုက်ရာသွင်းတော်မူလေသည်။ အမတ်ကြီးလည်း ဖြစ်ကြောင်းရယ်မှ ကုန်စင်ကို နှတ်သံနော၍ လျှောက်တင်လေတော့သည်။ “အဲ့ဒါကြောင့် အရှင်ဘုရားဆီ မှာ ယတြာတောင်းရတာပါဘုရား” ဟုသော အမတ်မိုက်၏ လျှောက်တင်သံအဆုံးတွင်
“ဘာပြောလိုက်တယ်” ဟူသော ဆရာတော်ဘုရား၏ အသံကြီးမှာ နန်းတော်ကြီး ပွင့်ထွက်မတတ် ကျယ်လောင်သွားသဖြင့် ဘုရင်နှင့်တကွ အမတ်များလည်း လန့်ဖြန့််ပြီး “ဘာဖြစ်လို့ ပါလဲ ဘုရား “ ဟု ပြိုင်တူလျှောက်တင်ကြလေသည်။ “ ဟင် အ လိုက်တဲ့မင်းကြီး န လိုက်တဲ့မင်းကြီး ဒီယတြာ ငါ့ဆီရှိမှတော့ ဒီနေ့ ဒီချိန် ဒီနေရာမှာ ငါ ရှိပါ့မလားဟဲ့ ကလေးတစ်သိုက်နဲ့ ထန်းတက်နေမှာပေါ့ တုံးလိုက်တဲ့ မင်းကြီး ငါ့ဆီက ယတြာ ရမှဆိုရင် ဒီတစ်သက် တစ်ပါးတည်းသာ နတ်ရွာစံပေတော့ “ ဟု ပြောဆိုကြိမ်းမောင်းပြီးလျှင် ထန်းလက်ယပ်ကြီးကို ဗုံးခနဲနေအောင် လွှတ်ချ၍ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးဖြင့် နန်းတော်ထဲမှ သဘောဆိပ် သို့ ထွက်ခွာကြွမြန်းသွားတော်မူလေသည်။
ဘုရင်လည်း အမတ်များဘက်သို့ လှည့်ပြီး မျက်လုံးစိမ်းစိမ်းများဖြင့် ကြည့်တော်မူပြီးနောက် တစ်ချက်လွှတ် အမိန့်အား ထုတ်ပြန်တော်မူလေတော့သည်။
“ ဒီတစ်နည်းမရရင် နောက်တစ်နည်း မရရအောင်ကြံကြ “
“ အမိန့်တော်မြတ် အတိုင်းပါဘုရား”
အမတ်မင်းများ အလုပ်ရှုပ်တော်မူလေပြီ ။ ဘယ်လိုဘယ်ပုံနှင့် ကြံရပါ့မလဲမသိတတ်တော့။သူ့အကြံ ကောင်းနိုးနိုး ငါ့အကြံကောင်းနိုးနိုးဖြင့် တိုင်ပင် နှီးနှော ဖလှယ် ရန်ဖြစ်နေကျလေတော့သည်။ နောက်ဆုံး ဘိတ်ဆုံး မတတ်သာသည့် အဆုံး အကြံတစ်ခုကို ကောင်းမွန်စွာ ထောက်ခံကြလေတော့သည်။ ထိုအကြံမှာ နန်းတော်တွင် ခိုင်ဘုရင်ကြီး တယုတယ မွေးကျွေးပြုစုထားသော အရောင်အဆင်းနှင့် ပြည့်စုံသည့် ခိုဖြူလေးတစ်ကောင် ရှိသည်။ထိုခိုလေးသည် လူစကားနားလည်၏ ။ဘုရင်၏ အရေးပါသော တမန်တော်ကိစ္စများကိုလည်း သူကဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူ့ကို အသုံးချရန် ကြံကြလေတော့သည်။
“ ကဲ အမတ်မိုက်နဲ့ အမတ်ပေ ကျုပ်တို့တော့ ဒီခိုဖြူလေးကို မိဘုရားလောင်းဖြစ်မယ့်သူပေါ်မှာ နားပါဆိုပြီးလှောင်ချိုင့်ကနေ လွှတ်လိုက်မယ် အဲ တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုတော့ အသိမပေးလေနဲ့ တော်ကြာ အိုနာ ကျိုးကန်းကလွဲ ရင် အကုန်လုံး အိမ်ထဲဝင်နေလိမ့်မယ် အခုဘဲစလိုက်ကြစို့ ‘’ ဟုဆိုကာ ခိုဖြူလေးကို လွှတ်တင်လိုက်လေတော့သည်။ ခိုဖြူလေးသည် နန်းတော်ထက်တွင် သုံးပတ်မျှ ၀ဲပြီးနောက် မြောက်စူးစူးသို့ ပျံသန်းလေတော့သည်။
“ ဟယ် မြောက်စူးစူးမှာ ဘာရှိလို့လဲ အမတ်များရဲ့ “ ခိုင်ဘုရင်ကြီး မေးတော်မူလေသောအခါ အမတ်များက ၀မ်းသာအားရလျှောက်တင် ကြလေတော့သည်။ “ မှန်လှပါ ထိုအရပ်တွင် ဂေဇက်တိုင်းသူ လုံမပျိုဖြူများသာ ရေချိုးရန် သတ်မှတ်ထားသော ပလုတ်တုတ်ကန် ရှိကြောင်းပါဘုရား
‘’ ဟယ် အခုလိုက်ကြမယ် အခုချက်ချင်း ပလုတ်တုတ်ကန်ကို ငါကိုယ်တော်မြတ် ကြွတော်မူမယ်’’
“ စိတ်ကိုထိန်းပါအုံး ဘုရား ဆင်စီး၍ ကြွတော်မူမလား မြင်းစီး၍ ကြွတော်မူမလား ဘုရား “
“ တယ်လည်း လျှာရှည်တဲ့ အမတ်ပေ ဖိနပ်စီးပြီးကြွတော်မူမယ် မီအောင်သာ လိုက်ခဲ့ကြ “ ဟုဆိုကာ ဘုရင်မင်းမြတ်တို့၏ အိနြေ္ဒဖြင့် ခလုတ်တိုက်မတတ် ပြေးလေတော့သည် ။အမတ်များလည်း နောက်မှ တစ်သီတစ်တန်းကြီး လိုက်ပါသွားကြလေတော့သည်။
ပလုတ်တုတ်ကန်ထဲတွင် ဂေဇက်တိုင်းသူ တို့သည် ပျော်ရွှင်စွာရေကစားလျက် ရှိကြသည်။ ကန်ဘေးပတ်လည်တွင်လည်း တောရိုင်းပန်းချုံများက လှပစွာ စီတန်း၍ ၀န်းရံထားလေသည်။ ခိုင်ဘုရင်သည် ကန်နှင့်မနီးမဝေးသို့ ရောက်သောအခါ “ ဟဲ့ အမတ်မိုက် ရှေ့ကနေ သွားကြည့်လိုက် ဘယ်သူ့ပုခုံးပေါ်နားတယ်ဆိုတာ ငါကိုယ်တော်မြတ် ရင်တုန်လွန်းလို့ နောက်ကဖြည်းဖြည်း လိုက်ခဲ့မယ် ဟုဆိုလေသည်။ အမတ်မိုက်လည်း ရှေ့သို့ ရင်ခုန်ခြင်းများစွာဖြင့် ပန်းချုံများကြား တိုးသွားလေတော့သည်။
“ ဟင်” မြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်းက အမတ်မိုက်၏ နှလုံးသွေး တို့ ပွက်ပွက်ဆူသွားစေသည်။ အမောဆို့သွားစေသည်။ ဒေါသများက အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ၀င်ရောက်လာကြပြီး ငယ်ထိပ်သို့ဆောင့်တက်သွားလေသည်။ ကြည့်စမ်းပါဦး ကြည့်လိုက်စမ်းကြပါဦး။ အမတ်မိုက်၏ ရှေ့တွင်မြင်ရသော မြင်ကွင်းထဲတွင် ဂေဇက်တိုင်းသားများ ဖြစ်ကြသော ကိုရင်ငကြောင်၊ ကိုရင်မိုဘိုင်း၊ ကိုရင်လင်းဆက် တို့သည်ကား ပန်းချုံများကြား မှောက်လျက် ရှေ့သို့ သည်းကြီးမည်းကြီး အလုအယက်တိုးနေကြလေသည်။ ဒေါသထွက်စရာ အကောင်းဆုံးကား ကိုရင်ငကြောင်လက်ထဲ တွင်ရှိနေသောအရာ။မိမိတို့၏ နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ကို ရှာဖွေပေးမည့်သူ၊ ဘုရင်ကြီး၏ အသက်ကယ်ဆေးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော ခိုဖြူလေးမှာ လည်ပင်းလိမ်လျက် ပိုးစိုးပက်စက် သေနေလေပြီ။လုပ်ရက်ကြပါပေ့ ငမိုက်သားတို့ရယ်။
“ ဟဲ့ ငမိုက်သားတွေ “ အမတ်မိုက်၏ ခေါ်သံအဆုံး ဒင်းတို့သုံးယောက်က သူခိုးလူမိသလို ပြူးပြူးပြာပြာဖြင့် ထလာကြလေသည်။ “ မောင်မင်းတို့ ဒီနေရာမှာ ဘာလာလုပ်ကြတာလဲ မှန်မှန်ပြောစမ်း”
“ ဟို အနော်တို့ လာချောင်းကြည့် အဲ ဟုတ်ပေါင် ပန်းလာခူးတာ ဘုရားမှာ လှုမလို့လေ အဟဲ ပန်းခူးကြတာ ဟုတ်တယ်မို့လား ကိုရင်တို့ “ ကိုရင်ကြောင်၏ စကားကို ကျန်နှစ်ယောက်မှ ၀ိုင်းဝန်းထောက်ခံကြလေသည်။
“ ဒါဖြင့် ဒီခိုက ဘာကိစ္စကြောင့်သေသွားတာလဲ ပြောစမ်း”
“ ဒီခိုလား မပြောချင်ပါဘူး အမတ်မင်းရယ် ဒီမှာလေ လူတွေရှေ့ကို လာပြီး ဟိုဘက်ဖလပ်ဖလပ်နဲ့ ပျံလိုက် ဒီဘက်ဖလပ်ဖလပ်နဲ့ ပျံလိုက်နဲ့ လုပ်နေတာ မြင်ကွင်းမရှင်းတာနဲ့ အနော်က လေးဂွနဲ့ ဆော်ထည့်လိုက်တာ အနော်တော်တယ်နော် တစ်ချက်တည်းဘဲ အမွှေးနုတ်ပြီးရင် အမတ်ကြီး ထန်းရည်နဲ့မြည်းရအောင်လာပေးမယ်နော် “
“တယ် မိုက်လိုက်တဲ့ငကြောင် မင်းပြစ်မင်းဒဏ် သင့်တော့မှာဘဲ ငါလုပ်လိုက်ရ “
“ အမတ်မိုက် “ ခိုင်ဘုရင်ကြီး၏ အသံ ။ နောက်မှာ ရောက်နေသော ဘုရင်ကြီးက အားလုံးကို ဇာတ်ရည်လည်သွားလေပြီ။ ထို့အတူ ငမိုက်သား သုံးယောက်သည်လည်း အဖြစ်အပျက်ကို ရိပ်မိသွား သဖြင့် ဒူးများ တဆတ်ဆတ် တုန်နေကြလေတော့သည်။ ပြားပြားဝပ်ပြီး ဘုရင်ကြီး အားအသနားခံနေသော မျက်လုံးများဖြင့် မော်ဖူးနေကြလေပြီ။
ခိုင်ဘုရင်ကြီး၏ မျက်နှာတော်မှာ ဝေခွဲရခက်လောက်အောင် နူးညံ့နေလေသည်။ တစ်ကယ်ဆို ဒီကိစ္စကား ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်း ထွက်ရမည့်ကိစ္စ ။ အမတ်များလည်း အနီးပါးမှ အရိပ်ခြေကို စောင့်ကြည့်နေရလေသည်။ “ ငါ့ရဲ့ကြင်ဖက်ကို တွေ့ပြီ” ဘုရင်ကြီး နှုတ်ဖျားမှ ထွက်ပေါ်လာသော အသံ။ တိုးညှင်းပေမယ့်  အမတ်များကောင်းကောင်းကြားရလေသည်။ ဘုရင်ကြီး၏ မျက်လုံးများက ငမိုက်သားသုံးကောင် ထံမှာ စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်လျက်။ အမတ်ပေ မနေသာတော့ တောင်းပန်ရပြီ။
“ စဉ်းစားပါအုံးဘုရား တွေးတောပါအုံးဘုရား ဘုရင်တို့မည်သည် မိဘုရားမြှောက်လိုလျင် အမျိုးသမီး ကိုဘဲ ရွှေးချယ် ရပါမည်ဘုရား လူကြားသူကြားလို့မှ မကောင်း ယောက်ကျာ်းကြီး သုံးယောက်ကိုများ မိဘုရားမြှောက်ရမယ်လို့ အောင်မလေး အမတ်မင်းတို့ လျောက်တင်ကန့်ကွက် ကြပါတော့လား “
အမတ်ပေ၏ လျောက်တင်သံအဆုံးတွင် ကိုရင်ငကြောင်တို့သုံးယောက်မှာ ထန်းသီးလုံးလောက်ချွေးများကျလျှက် ဒူးများခွေယိုင်ကာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်တွဲထားရလေသည်။
မည်သို့မျှ လျှောက်တင်စေကာမူ ခိုင်ဘုရင်ကြီး နားမ၀င်လေတော့။ တိကျသောဆုံးဖြတ်ချက်က မျက်နှာပေါ်တွင် အထင်းသားပေါ်နေလေပြီ။ ဘုရင်ကြီးရှေ့သို့တိုးလာလေပြီ။
ငကြောင်တို့သုံးယောက်လည်း မူးမိုက်ပြာဝေနေလေပြီ။ လေးလှမ်းမြောက်တွင် သူတို့ရှေ့သို့ရောက်လေပြီ။
“ပေးစမ်း အဲဒီအရက်ပုလင်း “ ဟုဆိုကာ ငကြောင်ခါးမှ အရက်ပုလင်းအား ယူ၍ ချာခနဲ လှည့်ထွက်သွားလေသည်။ ခိုင်ဘုရင်ကြီးမှာ နောက်သို့လုံးဝလှည့်မကြည့်လေတော့ သူ့အပေါ်တွင် သစ္စာရှိသော ကြင်ဖက်ကောင်းအား ရလိုက်သည့်အတွက် မိန့်မိန့်ကြီးတစ်လှမ်းချင်း ထွက်ခွာသွားလေပြီ။
ကျန်ခဲ့သောအမတ်သုံးယောက်မှာလည်း ယခုမှ စိတ်ဒုံးဒုံးချလိုက်ဟန်ဖြင့် ခွေခေါက်မေ့မျောနေသော ငကြောင်တို့သုံ့းယောက်အား တစ်ယောက်စီထမ်းကာ စိတ်မချမ်းသာစွာဖြင့် ပြည်တော်ပြန်ခဲ့ကြလေတော့သည်။
ရေကန်ထဲတွင် ရေချိုးပျော်ပါးနေကြသော ဂေဇက်တိုင်းသူ လုံမပျိုဖြူတို့မှာ ထိုအဖြစ်အပျက်တို့ကို လုံးဝမသိရှိလိုက်ဘဲ “ အားနာလိုက်တာ အချစ်ရယ် “ ဟူသောသီချင်းကို သီဆို၍ ရေပက်တမ်း ကစားနေကြလေသည်။
ခိုင်ဘုရင်ကြီး၏ မိဘုရားရှာပုံတော်ဖွင့်ခြင်းမှာ ဤသို့ လူမသိ သူမသိ ပြီးဆုံးခဲ့ပါလေတော့သည်။
ဗုံ ဗုံ has written 11 post in this Website..
View all posts by ဗုံဗုံ →
ဗုံဗုံရဲ့ ဇာတ်လမ်းဤ နေရာတွင်ပြီးဆုံးပါပြီ။ ဇာတ်သိမ်းနည်းနည်းညံ့သွားကြောင်း ၀န်ခံပါရစေ။ ဘုရင်ကြီးကိုသနားလို့ပါ ။ မေတ္တာဖြင့် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပေးကြပါသော သူဂျီးမင်းနှင့်တကွ အဘဖော၊ ဦးဦးပေ၊ ဦးဆာမိ ၊ဦးကြီးမိုက်၊ ဦးကြောင်၊ ဦးလေးမိုဘိုင်း၊ ဦးလေးအလက်ဆင်း၊ ဦးလေးစည်သူ တို့အား အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ 2013 အကယ်ဒမီပေးပွဲအတွက် ကြိုတင်ရင်ခုန်လို့ရပါပြီရှင်။ အားလုံးကို ဗုံဗုံကလေးစား ချစ်ခင်မှုဖြင့် ရေးဖွဲ့ပါသောကြောင့် အပြစ်တင်တော်မမူကြပါနှင့် ။ ကဲ အကယ်ဒမီပေးပွဲ အတွက် ဘုရားကြီးသွားပြီး ရွှေစင်ရုပ်ထု သွားမှာလိုက်အုံးမယ်နော်( အဟဲ)
နောက်ဆုံးတော့ သဂျီး က ကြင်ဖက် ကို တစ်ကယ် တွေ့ ရှိသွားခဲ့တာပေါ့နော်
မှတ်ချက် ကြင်ဖက် အားပြောင်းပြန်လှန်ဖတ်လျှင် ကျုပ် နဲ့ မဆိုင်
ဦးပေ ဗုံဗုံက ရိုးရိုးသားသားရေးတာပါနော် မိဗုံက အဲ့လိုမျိုးတွေ တွေးတတ်ဘူးရယ် ဘုရင်ကြီးစိတ်ဆိုးရင် အမတ်ပေ ချော့နေရမယ်နော -ဟဲဟဲ
နိုင်ငံဂျီးသား မပီသလိုက်တဲ့ လူပါလားနော်။
ကြင်ဖက် = ကျက်ဘင် (မပြင်ရ) ..
ဖစ်တီဟု ထင်ဘာဂျောင်း ..
အံမယ် ကိုရင်မိုဘိုင်းက မိဘုရားမြှောက်ခံချင်နေတယ်ပေါ့လေ ဒီလိုမှန်းသိ –ဒီလိုမှန်းမသိလို့–ဒီလိုဇာတ်သိမ်းလိုက်ပါရဲ့
ယခုတစ်ကြိမ်တော့ရှိစေတော့ . . .
နောက်တစ်ကြိမ် ပိုင်ရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ နာမည်အား ၀တ္ထုထဲသို့၎င်း ပုံပြင်ထဲသို့၎င်း
ထည်သွင်းခြင်းပြုလုပ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါက မြန်မာနိုင်ဂံ၏ မူပိုင်ခွင့်
တည်ဆဲး အူးပဒေအရ ထိရောက်စွာ ရက်ရက်စက်စက် အရေးယူမည်ဖြစ်ပါကြောင်း……
အင်းးးးးးးးးးးး တော်သေးတာပေါ့ သူကြီးက စိတ်ပြောင်းသွားလို့
မဟုတ်ရင် ဟိုသုံးယောက်တော့ မလွယ်ရေးချ မလွယ်
အော် ဗုံဗုံ ဗုံဗုံ တယ်လဲလက်စွမ်းထက်ပါရောလား ငတို့ သူကြီးခမျာ အရက်သမားဘွနဲ့ နန်းသက်ကုန်ဆုံးရတော့မှာပေါ့လေ
ဟုတ်တယ် အစတုန်းက ဗုံဗုံက ဦးလေးသိကြားမင်းကို ဖန်ဆင်းခိုင်းမလို့ အဲ့ဒါ နတ်ပြည်ကိုကြည့်လိုက်တော့ ဦးလေးသိကြားက အားဘူးရယ် နတ်သမီးငါးရာအတွက် သနပ်ခါး သွေးနေတာမြင်ရလို့ မိဗုံက အပူမကပ်တော့တာ (အဟီး)
ဦးမာဃ ခုတလော ကံမကောင်းပါလားကွယ်
ဗုံဗုံရေ ဦးမာဃ က သနပ်ခါးသွေးနေတာမှုတ်ဖူးကွယ့် အဲဒါ ဆေးကြိတ်နေတာ
တော်မှ တော်ပေသေး အရက်ပုလင်းကယ်ပေလို့
နို့မို့ဆို ကိုရင်ငကြောင်၊ ကိုရင်မိုဘိုင်း၊ ကိုရင်လင်းဆက်တို့ သုံးယောက်ဘ၀ တွေးရဲဘူး :harr:
မဗုံက အရေးကောင်း လက်ကလေးပါလားနော်။ အခုလောက်ဆို ဘုရင်ကြီးသူကြီးတော့ ကောင်းမှကောင်း
နို့မို့ဆို ဘုရင်ကြီးခမျာ တကယ့်လက်တွေ့မှာ မဟေသီရဲ့ လက်စောင်း
အဲ- မျက်စောင်းဒါဏ် ကောင်းကောင်းခံ နေရရှာမှာ။ :saut:
ခိုစာကျွှေးပြီး စည်းရုံးထားသော မိုးကြိုးငှက်ငယ်အဖွဲ့ဝင်များ
ကိုရင်ငကြောင်တို့ သုံးယောက်အား ဆုံးမရန်လိုက်ရှာနေကြောင်း
အော် .. အော် ..
ဒို့ဘဂျီး အရက်ပုလင်းနဲ့ ညားတွားရဒဂိုး ..
အားအမတ်မိုက် ကိုကင်ခိုင်းလိုက်ပီး ဒါဘယ်ဘလက်ပုလင်းဖွင့်ကာ
ယမကာလုင် လုပ်၍နေလေပီ…. ဂေဇက်တိုင်းပြည်ကြီး၏
အုပ်ချုပ်စီမံခြင်းအလုပ်ကိုမူ အမတ်မိုက်နဲ့ အမတ်ပေ အားထာဝရလွှဲအပ်ထားလိုက်လေတော့သတည်း။
ကျုပ်တို့ သူကြီးက အရက်သမားကြီးလား…
ကျုပ်တို့ သူကြီးက မယားတရူးကြီးလား…
ကျုပ်တို့ သူကြီးက မိန်းမမရလို့ ယတြာရတောင်းတဲ့ တဏှာရူးကြီးလား…
ကျုပ်တို့သူကြီးက နောက်ဆုံးငကြောင်အရက်သောက်ပြီး အရိုးထုတ်သွားတဲ့ ဇာတ်နာတဲ့လူကြီးလား…
ပြောစမ်းပါ… ပြောစမ်းပါ… (ပါးစပ်အရသာရှိလိုက်တာ…)
သူဂျီးဘုရာ့ .. ကန်တော့ကန်တော့
သဂျီးသဘောကျတယ် ဆိုလို့ကတော့ တောင်းစရာမလိုဘူး ပေးပြီးသား.. ရော့ အင့်..
ဗုံဗုံရယ်… အရေးကောင်းချက်က ပြုံးတုံ့တုံ့ တင်မဟုတ်ဘဲ အားပါးတရ ရီလိုက်ရပါတယ်..
ဟာသ ဥာဏ်လေးကလည်း သန်ပါ့တော်..
ဦးကျောက် နဲ့ မောင်နှမ တော်ပုံရဒယ်……
ခိုင်ဘုရင်ကြီး ကြင်ဖက် မရပဲ
သောက်ရင် သောက်သလောက်မူးတယ် :harr:
အသံမည်တဲ့  ဗုံတစ်လုံးပဲ ဟေ့ …………..
ဆက်တီးပါ …….. ဆက်တီးပါ ………..ကြာကြာတီးပါ
စာမြည်းလေးတွေပေးပြီး ထွက်သွားတတ်လွန်းလို့………
နောက်ထပ်ဘယ်လို ဗုံသံလာမလဲ လို့ ……………
ဗုံကြီးသယ် လိမ်လည်လှည့် 
နားးးးးးးးး ချဲ့ မိတယ်……….
အဲဒီကဗျာထဲကလိုတော့မလုပ်နဲ့ နော ….စာများများရေးး
တီးလွန်းလို့ နားညီးတယ်လို့ မပြောရဘူးနော် ဦးဦးဆာမိ မိဗုံတို့က သူများအကြောင်းမကောင်းရေးရရင် မစားဘဲ မအိပ်ဘဲကိုရေးတာ (အဟီး)
ပိုစ့် နဲ့ မန့် တွေ ဖတ်အပြီး အားရပါးရ ရယ်မိတယ်..
ပြီမှ သတိရတာ အဲ့လိုမရယ် ဖြစ်တာတောင် ကြာခဲ့ပြီဘဲ..
ဗုံ ညီမလေး ရဲ့ ဟာသဥာဏ်ကလည်း ရွှင်ပါ့နော်..
စဆုံးအားပေးသွားပါတယ်ဗုံဗုံရေ နောက်ဆုံး ခိုင်ဘုရင်ကြီးလဲ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. အရက်နဲ့ဖက်ရတာ ကောင်းပါတယ်..။
အမူးသမားက.. မူရင်း.. မူးရင်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အတွက်..
ဒါဆို မူးပီး ရမ်းဒဲ့ လူဒွေရော
၄ ဘားသီလ လုံဒလားဟင်င်င် …
သဂျီး သဂျီး လျှာထွက်အောင် တရားချလည်း ဘယ်တော့မှာ ဇင်မိုးပြာလက်က လွတ်မှာ
တပ်မ ၇၇ တောင် ကိုရင်နဲ့ တခါ အရက်အတူတူသောက်ပြီး အူးစည်
တရားဟောလိုက်ဒါ အကျွတ်တရားရပီ.. ကျောက်ဖြူဘက်တောင်
ဗုံဗုံကော အူးစည်ဟောမယ့် အဂျစ်တရား နားမထောင်ချင်ဘူးရားဟင်..
ရုပ်ရှင်ကားဒွေ ထဲမှာ ဆိုရင် မူးပြီး
ဖိနပ်ကလေး မှောက်တွားဒါ…. ချိပ ချိပ…
၄ပါးသီလ မလုံနိုင်ဘူး ဂျာ… ယုံဘူးဂျာ… ယုံဘူး
အဲဒီ ၀တ္ထု..ရုပ်ရှင်တွေမှာ.. အရက်မသောက်ဖူး.. မိန်းမ/ယောက်ျားမရှိဖူးတဲ့သူတွေ.. ပေါက်တတ်ကရလုပ်လွှတ်တာ.. လူထုကခံနေရတာပါဗျာ…
မြန်မာပြည်နာမယ်ကြီးဝတ္ထုရေးတာတွေများ.. မဆလခေတ်က.. စင်ဂယ်အပျိုတွေများခဲ့တာကိုး..။
အရက်ကို.. အရသာရှိရှိ.. မူးအောင်သောက်ပြီး.. နှင်းဆီပွင့်ဖတ်လေးဒွေ ကြွေအောင်.. ကိုယ့်လေဒီနဲ့ကိုယ်.. ကြိုးစားကြည့်ပါလား..
Alcohol playsarole for many in our culture in their sexual releationships, but drinking can causeavariety of negative sexual effects on both men and women.
Alcohol and sex in men
Men’s sexual behaviors can be affected dramatically by alcohol. Both chronic and acute alcohol consumption have been shown in most  (but not all) studies to inhibit testosterone production in the testes. This is believed to be caused by the metabolism of alcohol reducing the NAD+/NADH ratio both in the liver and the testes; since the synthesis of testosterone requires NAD+, this tends to reduce testosterone production.
As testosterone is critical for libido and physical arousal, alcohol tends to have deleterious effects on male sexual performance. Studies have been conducted that indicate increasing levels of alcohol intoxication produceasignificant degradation in male masturbatory effectiveness. This degradation was measured by measuring blood alcohol concentration (BAC) and ejaculation latency. Alcohol intoxication can decrease sexual arousal, decrease pleasureability and intensity of orgasm, and increase difficulty in attaining orgasm.
တစ်လျောက်လုံး သဂျီးကို ကန့် လန့် လုပ်လာတာ
ဒီတစ်ချက်တော့  ထောက်ခံလိုက်ပါ့ မယ် …..
အနစ္စ ( c/d2သဂျီး )
ဟောဟော တွေ.လားတွေ.လား ခေါင်းလောင်းဆိုတာ တီးမှမြည်ဒါ… အခုတော့ မြည်ပီ မြည်ပီ..
ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို. ထင်တော့ထင်သား….
ချိတ်ချိုးနဲ.နော် တဂျီး………. အဟီးးးးးးးးးး :hee: :hee:
ဗုံဗုံရေ – ထပ်ပြီးရေးပါဦး။ အဲလိုလေး အားရ၊ ပါးရ မပြုံးမိတာ ကြာပါ့နော်။
ရှေ့ကအပိုင်း ပြန်ဖတ်လိုက်အုံးမယ် ……………။
ဟိုတလောမယ် ရွာထဲ ဒီလိုအရေးအသားလေးတွေ ရှိပ
နောက်ပိုင်း လူပြောသူပြောများလို့လား မသိ မတွေ့ရတော့ဘူး..။
နောက်ထပ်လည်း စောင့်မျှော်နေပါတယ်ဗျို့ ..
ရေကန်ထဲတွင် ရေချိုးပျော်ပါးနေကြသော ဂေဇက်တိုင်းသူ လုံမပျိုဖြူတို့မှာ……………
ကိုယ်ကချောင်းပြီး…သေချာ .မသိလို့ မေးတာ ။
အင်း..ခိုင်ဘုရင်ကြီး..Man to Man ကြီးများလား..ပေါ့နော် ။